Toyota oo xarun ka furatay Muqdisho | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Toyota oo xarun ka furatay Muqdisho
Toyota oo xarun ka furatay Muqdisho
Mogadishu (SNTV)-Shirkadda ayaa 27-sana kadib ka furatay xafiis ay leedahay magaalada Muqdisho oo uu maanta xariga ka jaray wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Somalia Maxamed Cabdi Xayi Maaraaye.
Wasiirka ayaa sheegay in arrintan ay qeyb ka tahay qorshaha maal gelinta shirkadaha shi-sheeye ay ku maal gashanayaan Soomaaliya, waxa uu sidoo kale sheegay in Soomaaliya baabuurta laga isticmaalo ay isku soo mari jireen ilaa laba gacan balse wixii xilligan ka dambeeyo arrimahaas la xalin doono.
Shirkadda ayaa sameyn doonto dalabyo cusub iyo dib u habeyn lamid ah sida dowladaha kale ee caalamka ay ula macaamilaan, waxa ayna arrintan qeyb ka tahay dadaallada lagu horumarinayo arrimaha ganacsiga Soomaaliya.
Hadalkan ayuu u sheegay laanta afka Soomaaliga ee VOA, waxa uuna sii raaciyay in Soomaaliya wixii xilligaan ka dambeeyo ay dunida u iib geyn-doonto agabyada ay caanka ku tahay halka xilli hore Soomaaliya loo iib keeni jiray alaabaha dowladaha kale.
Previous articleShir looga hadlayo in la helo sharci mamnuucaya dhoofinta dhuxusha oo ka furmay Muqdisho
Next articleKheyre oo la dar-daarmay ciidamo isku dhaf oo amniga Muqdisho ka shaqeynayo.